विश्वका टप २० एयरलाइन्सको सूची सार्वजनिक, कुन सबैभन्दा सुरक्षित ? « Lokpath
विश्वका टप २० एयरलाइन्सको सूची सार्वजनिक, कुन सबैभन्दा सुरक्षित ?
काठमाडौं । २०२० र २०२१ को सुरुवाती समय एयरलाइन्सहरुका लागि सुखद रहेन । कोरोना महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेपछि मानिसहरु घरभित्रै बस्न बाघ्य भए । जसका कारण विभिन्न क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा असर पर्यो त्यो मध्ये एक हो एयरलाइन्स कम्पनी ।
यसैबीच एयरलाइन्सरेटिङ डटकमले विश्वका टप एयरलाइन्सको सूचि २०२१ सार्वजनिक गरेको छ । एयरलाइन्सरेटिङ डटकमका अनुसार कतार एयरवेज विश्वकै एक नम्बरमा रहेको छ ।
एयरलाइन्स रेटिङ डटकमले कतार एयरवेज विश्वकै एक नम्बरमा राखेको छ । कोरोनाको समयमा कतार एयरवेजले धेरै उद्धार उडान गरेको थियो । कतार एयरवेजको कम्फट र सेफ्टीका आधारले पनि माथि रहेको एयरलाइन्सरेटिङ डटकमले जनाएको छ ।
त्यस्तै कतार एयरवेजपछि दोस्रो नम्बरमा एयर न्यूजिल्यान्ड रहेको छ । तेस्रो नम्बरमा सिङगापुर रहेको छ भने चौथो नम्बरमा क्वान्टास एयरलाइन्स रहेको छ । त्यस्तै पँचौ नम्बरमा एमिरेट्स एयरलाइन्स रहेको छ ।
विश्वका २० उत्कुष्ट एयरलाइन्स :
क्याथे प्रशान्त एयरलाइन्स
भर्जिन अटलान्टिक एयरलाइन्स
जापान एयर लाइन्स
के एल एम एयरलाइन्स
प्रकाशित मिति: २०७८,श्रावण,६,बुधबार १२:०७